Sidee Martigelintaadu saameyn ugu yeelan kartaa SEO-gaaga | Martech Zone
Sidee Martigelintaadu u saameyn kartaa SEO-gaaga
Wednesday, September 6, 2017 Wednesday, September 6, 2017 Douglas Karr
Haa, martigelintaadu waxay saameyn ku yeelan kartaa SEO-gaaga. Yaabay? Sidoo kale dadka badankood waa markay ogaadaan in qorshahooda martigelinta ay saameyn ku yeelan karaan awooddooda ay ku gaarayaan SERP-yada sare. Laakiin sababta? Oo sidee?
Isbedelay, qorshahaaga martigelinta ayaa saameynaya seddex meelood oo waaweyn kuwaas oo dhammaantood saameeya darajooyinkaaga: Amniga, Goobta, iyo Xawaaraha. Waxaan ku siin doonaa burburin dhammaystiran ma aha oo kaliya sida qorshaha martigelintaadu u saameynayo waxyaalahan, laakiin waxa aad sameyn karto si aad u xulato martigelinta ugu fiican loogu talagalay dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah, iyo sida loo yareeyo sababaha dhibaatada leh haddii aad la kulanto.
Amnigaaga Marti Gelintaada
Nabadgelyadu waa mid ka mid ah arrimaha aasaasiga ah ee laga walwalo marka aad maamusho degel, haddii aad ku howlan tahay howlo SEO ah iyo haddii kale! Xeerka aasaasiga ah ee suulka ayaa ah kan: amniga aad u yartahay ee shabakadaadu tahay, waxay u badan tahay inay jabsato. Iyo haddii ay dhacdo inaad jabsato, waxay u badan tahay in waxyaabahaaga wax laga beddeli karo si aad u lumiso qiimeyn kasta oo aad heshay.
Marka, halka amniga liita uusan macnaheedu ahayn in websaydhkaagu dhib kala kulmi doono helitaanka darajooyinka, waxay ka dhigan tahay halista aad leedahay badiyay darajooyinka ayaa ugu dambeyntii ka sareeya. Sababtaas awgeed, waxa ugu horreeya ee aad ku hubiso adeeg bixiye kasta oo martigelinaya waa ammaankooda. Ma bixiyaan nabadgelyo lagu soo rogay qiimahooda? Iyagu ma kormeeraan faylashaada? Haddii kale, ma waxay bixiyaan nabadgelyo dheeraad ah oo khidmad dheeri ah leh? Ma kaa caawin doonaan haddii boggaaga internetka la jabsaday? Miisaan inta badan ee doorsoomayaasha ah inta aad awooddo ka hor intaadan naftaada ku xirin xirmo gaar ah oo martigelin ah.
Haddii qorshahaaga martigelinta uusan bixinaynin amni dheeri ah oo dheeraad ah oo aad horeyba ugu xirnayd, had iyo jeer samee qaar ilaa aamin boggaaga ka dhanka ah haakarisku sida ugu fiican ee aad awoodid. Ku darista waxyaabaha loogu talagalay amniga, sameynta furaha sirta ah ee aaminka ah, iyo adeegsiga dhaqamada caqliga saliimka ah ayaa kaa caawin kara yareynta halista.
Goobta Qorshahaaga martigelinta ee Server
Markaad iibsaneyso martigelinta, waxaad ku iibsaneysaa boos muuqaal ah server-ka shirkadda. Websaydhkaaguna wuxuu u fiicnaan doonaa (ama ka sii xumaanayaa) dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato iyadoo ku saleysan meesha uu ku yaallo adeeggaas. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad bartilmaameedsato millennials-ka Jarmalka ee jecel inay wax kariyaan, waxaad ku arki doontaa natiijooyin wanaagsan natiijooyinka raadinta Jarmalka haddii martigelintaadu leedahay meel euro ah (ama ka sii wanaagsan, Jarmal).
Xeerkan suulka guud ahaan wuxuu ku taagan yahay heer qaran adduunka oo dhan. Nasiib darrose, shirkadaha martigaliya badankood waxay leeyihiin xarumo xogeed dhowr magaalo oo cayiman. Ma waxay ku sugan yihiin waddammada ama aagagga ballaadhan ee caalamiga ah ee bartilmaameedkaaga? Saameyntu waxay noqon kartaa mid yar, mustaqbalka fog, oo dhab ahaan ma ahan mid muhiim ah ama culeys leh sida lahaanshaha bogagga cinwaannada saxda ah: laakiin waa falaa samee isbeddel.
Haddii aad rabto inaad yareyso saameynta websaydh lagu marti geliyey aag aad u kala duwan marka loo eego bartilmaameedkaaga, waxaad isku dayi kartaa inaad ka gudubto taas adoo ku daraya macluumaadka deegaanka iyo macluumaadka gaarka ah ee boggaaga, bogaggaaga, iyo wixii kale qoraal muhiim ah oo la xiriira SEO. Ku darista khariidadaha google-ka websaydhkaaga oo tilmaamaya meelaha ku dhow dhagaystayaasha aad bartilmaameedsanayso sidoo kale waa fikrad aad u fiican!
Xawaaraha Bixiyahaaga Martigelinta
Xawaaraha bixiyahaaga martigelinta ayaa si weyn ugu xira goobta: hadba sida kuugu dhow ee uu kuugu jiro serverkaagu meesha jireed ee qofka ugu dambeeya ee soo jiidaya boggaaga, guud ahaan marka la hadlayo, sida ugu dhakhsaha badan waqtigooda rarku waa. Laakiin taasi waa hal shay oo yar oo ah xawaaraha martigelinta kaas oo saameyn ku yeelan kara booskaaga raadinta google.
Cunsur kale oo saamayn ku leh xawaaraha ayaa ah processor-ka server-ka, iyo inta baaxadda iyo RAM ee shabakaddaada loo qoondeeyay. Sababtaas awgeed, martigelinta heeganka ah guud ahaan ka dhakhso badan martigelinta la wadaago. Waxaa xusid mudan in booqdayaasha iyo taraafikada badan ee websaydhkaagu helo, inbadan oo ka mid ah server-ka ay u baahan tahay: marka awood u lahaanshaha ballaarinta sida loogu baahan yahay halkii laga xadidi lahaa qayb yar oo ka mid ah server-ka la wadaago iyadoon loo eegin inta taraafikada ee boggaagu yahay. helitaanku waa mid aad u qiimo badan.
Haddii aad wali raadineyso marti-gelin, inaad si dhaw ugu fiirsato qodobadan waxay kaa caawin kartaa inaad websaydhkaaga si fudud lug ugu hesho meesha SEO ay khuseyso. Qaadashada xirmada martigelinta saxda ah waxay buuxin kartaa dhammaan amnigaaga, goobtaada, iyo xawaaraha aad u baahan tahay si aad u hubiso inaadan ka bilaabanaynin khasaaro. Laakiin waxaa muhiim ah in tan loo dhigo aragti: waxyaabaha ugu waaweyn ee saameeya SEO-ga websaydhkaaga ayaa had iyo jeer noqon doona waxyaabaha goobta ka socda.
Tags: qorshaha martigelintamartigelinta amniga qorshahamartigelinta xawaaraha bixiyahasidaxawaaraha sidee saameyn ugu leeyahay seoayna search engineSEOxawaaraha seogoobta adeeggaxawaaraha seohosting web
Tafatirka Mawduucyada Emailka ee OSX ayaa ka Fudud Fududeynta Mawduucyada
Shaqo-socodka: Hab-dhaqannada ugu Wanaagsan ee Qalabaynta Waaxda Suuqgeynta Maanta